Wednesday April 01, 2020 - 12:32:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Mareykanka ayaa wajahaysa dhibaatadii ugu xumeed ee kasoo gaarta cudurka dilaaga Carona Virus kaasi oo wadanka si aan horay loo arag ugusii faafaya.
Warbaahinta Mareykanka ayaa xaqiijisay in shalay oo kaliya ay Carona Virus udhinteen dad gaaraya 865 qof American ah taas oo ka dhigan dhimashadii ugu badneed ee Carona uu maalin qura ka geysto wadanka Mareykanka.
Dhimashada guud ee dadka Covid19 ugu dhintay Mareykanka ayaa kor udhaaftay 4076 qof sida ay sheegtay jaamacad caafimaad oo kutaal magaalada Washington.
Dadka Carona la buko ayaa gaaraya 188 kun oo qof tani waxay ka dhigantahay in Mareykanku yahay dalka koowaad ee dadkiisu ladhibanyihiin caabuqa Covid19, dhinaca kale shaqaalaha markab dagaal oo diyaaradaha xambaara ayaa codsaday gagaar degdeg ah.
Kabtanka Markabka diyaaradaha dagaalka xambaara ee Theodore Roosevelt ayaa codsaday in dhammaan shaqaalaha markabka barriga loo dajiyo lana karaantiilo kadib markii laga helay Carona Virus.
Wasiirka difaaca Mareykanka ayaa sheegay in waqtigan la joogo aysan haboonayn in shaqaalaha markabka dhulka lageeyo lana karaantiilo wuxuuna amray in dhaqaatiir iyo howlwadeenno caafimaad loo diro si ay ula socdaan xaaladda caafimaad ee shaqaalaha.
Markabka Theodore Roosevelt ayaa kamid ah maraakiibta diyaaradaha dagaalka xambaara waxaana dulsaaran diyaaradaha ugu casrisan ee dowladda Mareykanka ay ku faanto.